~* ~* ~*~ မေတ္တာအိမ် ~* ~* ~* ~
တည်တည် ငြိမ်ငြိမ် မေတ္တာအိမ်
Posted by နှင်းပွင့်လေး at 11/19/20120comments Links to this post
** မျှော်လင့်တဲ့ အချိန်လေး **
***အကြင်နာပြီး၇င် အချစ်လာမယ် ***
** အချစ် **
ကြောင်ကလေး အမည် မပူစီ
*** ဘ၀ကြီးရယ် ***
ဘာကြောင့် နားလည် မပေးကြတာလဲ
ဘာကြောင့် ကိုယ်ချင် မစာနာကြတာလဲ
ဘာကြောင့် ရက်စက်မှုတွေ ပေးရတာလဲ
** သဘာဝ ပန်းချီကား **
** ကြယ်ကြွေဆုတောင်း **
** လွမ်းသူလေး **
** တည်ငြိမ်နေတဲ့ ကန်ရေပြင်ကို
> လူတစ်ယောက်ဟာ နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကို \_"အသုံးမကျတဲ့လူ\_" လို့ ပြောလို့ အဖမ်းခံရသတဲ့။ ရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးနောက် တရားသူကြီးက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် ၁၀နှစ်နဲ့ ၆ရက် အမိန့်ချလိုက်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့ အပြစ်ကိုပေးရသလဲလို့ မေးတော့ တရားသူကြီးက \_" ပြစ်ဒဏ် ၆ရက်က နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကို စော်ကားတဲ့အတွက် ပြစ်ဒဏ် ၁၀နှစ်က နိုင်ငံတော်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိ
ု ဖော်ကောင်လုပ်တဲ့အတွက်\_" လို့ ပြောလိုက်သတဲ့။
> တစ်ခါက နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ ခေါင်းဆောင်သုံးဦးဟာ ရဟတ်ယာဉ်စီးပြီး နိုင်ငံအခြေအနေကို လှည့်လည်ခဲ့တယ်။
> ပထမ အကြီးအကဲ \_" တကယ်လို့ အခုချိန်မှာ ငါသာ ငွေတစ်ထောင်တန်တစ်ရွက်
တစ်နေ့ ကိစ္စရှိလို့ မြို့ထဲ အသွား သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ကျွန်တော် ကို
\_" ဟေ့ကောင် online တတ်ခဲ့ဦး...\_"တဲ့။ ဒါနဲ့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်..\_"
ဟာ..အိမ်မှာ မဟုတ်ဘူးကွ.. မြို့ထဲရောက်နေတယ် \_"ဆိုတော့.. \_" ရောက်ရာ အရပ်က
ဒါနဲ့ နီးစပ်ရာ မြန်မာဆိုင်ကနေ online တတ်ပြီး သူငယ်ချင်းနဲ့
စကားပြောနေတုန်း... ဆိုင်ထဲကို ယောင်လည်လည် နဲ့
** മദര്‍ **
င့်ပေးလိုက်တယ်..။ ၁၉ နှစ်အရွယ် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အားကစားမယ်လေးတစ်ယောက်
.........ကလေးတစ်ယောက်လိုဝတ်ဆင်ထားပြီး Nike အပြေးလေ့ကျင့် ဖိနပ်တစ်ရန်
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ဘုန်းတန်းခိုဆိုတာ အလုပ်လုပ်ခြင်းပဲ
ဆင်ခြေပေးတဲ့ ပါးစပ် ထမင်းငတ်တတ်တယ်
ကိုယ့်ဘ၀ကို သိ၊ ကိုယ့်အားကိုယ် ကုိး၊ လဲရင်ပြန်ထ ဒါဘ၀ပဲ
အကျင့်စာရိတ္တသည် ထိုသူ၏ ကံကြမ္မာပင် ဖြစ်သည်
နေသလိ်ုဖြစ်တဲ့ ဘ၀မှာ ဖြစ်သလိုမနေပါနဲ့
အသက်အားဖြင့်(၈၀)နီးပါး ကပ်လေပြီဖြစ်သည့် စာရေးဆရာအိုကြီးသည် ၄င်းအားလာရောက်ကန်တော့ကြကုန်သော တပည့်တို့နှင့် ဆုံသည့်အခါဝယ် . . . မမျှော်လင့်သော စကားတစ်ခွန်း ဆိုလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့် အားလုံးအံ့အားတသင့် ဖြစ်သွားကြကုန်၏။
တပည့်များ ။ ဆရာကြီးရယ်. . . အသက်တွေလည်း ဒီလောက်ရှိနေပါပြီ။ ဆယ်ကျော်သက်ကတည်းက
ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်သည် ကျေးလက်တော ရွာတွင်နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကျော်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့နှစ်ဦးသည် အိမ်ထောင်သက် နှစ်ငါးဆယ်ပြည့်ရွှေရတုသဘင်ကို ဆင်ယင်ကျင်းပရန်အတွက် အလွန်ကြီးမားသော မြို့ကြီးတစ်မြို့သို့ သွားရောက်ကြပြီး အလွန်ခမ်းနားသောဟိုတယ်
လူချောလေးတစ်ယောက်မှာ ချစ်စခင်စ ကြင်နာစရည်းစား
သူ့အသည်းလေး မွေးနေ့အတွက် အမှတ်တရဖြစ်အောင်…ဘာလက်ဆောင်ပေး
** အငိုမျက်ဝန်း အပြုံးမျက်နှာ **
** ☺ ** အားပေးဖော် ** ☺ **
** စာချွန်လွှာ **